Sawirro+Dhageysi) Zako Qeybinta oo Si Hab Sami Leh Uga Socota Shabeelaha Hoose. – Shabakadda Amiirnuur
December 23, 2017 7:42 am by admin Views: 259
Dhammaan gobolada ay maamusho Xarakada Al-Shabaab waxaa si hamsami leh uga socda qeybinta Zakada xoolaha nool, waxaana warbixintan ku eegeynaa gobolka Shabeelaha hoose.
Maamulka islaamiga ah ee gobolkan ayaa inoo sheegay in tirada guud ee xoolaha la qeybinayo ay gaarayaan 3239 Neef (Sadax kun laba boqol sodon iyo sagaal neef) oo isgu jira Geel, Lo’ iyo Ari. Geela waxaa la bixinayaa 242 Neef, Lo’du waa 38 Neef, halka Ariga la bixinayo 2959 Neef.
Haddaba hawshan ayaa si habsami leh u socota waxaana illaa iyo hadda laga qeybiyay dhowr degmo oo gobolka ka tirsan. Magaalada Marko waxaa la qeybiyay 73 Ari ah, 3 Geel ah iyo 2 Lo’ ah. Sidoo kale waxaa degmada Kurtunwaarey laga qeybiyay 268 Nef oo Ari ah, 21 Geel ah iyo 7 Lo’ ah.
Magaalada Buulomareer waxaa laga qeybiyay 62 Ari ah iyo 4 Geel ah, halka Wanlaweyn laga qeybiyay 1171 Ari ah iyo 53 Geel ah. Intaa waxa dheer degmada Afgooye, waxay mujaahidiintu ka qeybiyeen 98 Neef oo Ari ah, 3 Geel ah iyo 5 Lo’ ah. Baraawana waxaa laga qeybiyay 679 Ari ah, 48 Geel ah iyo 5 Neef oo Lo’ ah.
Dhamaan dadka la siiyay xoolahan ayaa Allaah kadib u mahad celiyay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo dhaqan galisay ruknigan oo kamid ah arkaanta islaamka, kaasoo ay dhaqan galintisu tahay in dadka kuwooda hodanka ah wax laga qaado laguna celiyo kuwooda fuqarada ah. Haddaba maamulka islaamiga ah ee Sh/hoose ayaa inoo sheegay in hawshu wali socoto.